Mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, Vanosangana neVapoteri vakatiza Hondo kuUkraine Vachipotera kuPoland
Kurume 26, 2022
Mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, vachisangana nevapoteri vekuUkraine vari muPoland.
Mutungamiri weAmerica VaJoe Biden, avo vari kushanya kuPoland, vasangana nevapoetri vakatiza hondo kuUkraine avo vakapotera muPoland.
VaBiden vaperekedzwa kunhandare yePGE Narodowy Stadium iri mu Warsaw, guta guru rePoland, nameya veWarsaw VaRafal Trzaskowski, avo vapira VaBiden nezverubatsiro rwuri kupiwa neguta ravo kuvapoteri ava, pamwe nemutungamiri wehurumende yePoland VaMateusz Morawiecki.
VaBiden vasanganawo nemutungamiri wenyika yePoland, VaAndrzej Duda, vakazeya kupinda kweRussia muUkraine zvechisimba, apo Russia yave kuratidza seyave kusiya kurwisa guta guru reUkraine, reKyiv, yave kunanga kumabvazuva kwenyika iyi.
Poland, iyo inove nhengo yeNATO, yakatora vapoteri vanodarika mamiriyoni maviri vakabva kuUkraine.
VaBiden vakasvika kuPoland neChishanu kunozvionera vega matambudziko ari kusangana nevapoteri vakatiza misha yavo mushure mehondo yakakonzerwa neRussia mushure memisangano mikuru mitatu yavakaita nemusi weChina muBrussesls, guta guru reBelgium inoti weNATO, weG-7 pamwe neweEuropean Union.
VaBiden vakasanganawo nemauto enyika yavo ari muPoland nemusi weChishanu.
America yakazvipira kuti ichapa imwe mari inosvika bhiriyoni rimwe remadhora yekubatsira vakakanganiswa nehondo iyi.
VaBiden vakapomera zvakare mutungamiri weRussia VaVladmir Putin kuti vakapara mhosva dzehondo nekupinda kwavakaita muUkraine nechisimba.